१५५ यात्रुलाई पानीमा अवतरण गराई सकुशल बचाउने \_'हिरो पाइलट\_'को अनुभव
माघ ३, २०७४| प्रकाशित १३:५६
एजेन्सी- यो हरेक यात्रुका लागि मृत्युलाई स्पर्श गरेको सपना जस्तो थियो। जतिबेला ककपिटबाट पाइलटको आवाज जहाजभरि गुन्जियो, ‘इन्जिन पावरमा आएको खराबीका कारण युएस एयरवेजको एयरबस ३२०ए विमान तल झर्दैछ। कृपया यसका लागि आफूलाई तयार बनाउनुहोस्।’
यो घटना आजभन्दा ९ वर्षअघि ठिक यही साता नै भएको थियो। जब अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित लाग्वार्डिया विमानस्थलबाट उडेको युएस एयरवेजको फ्लाइट १५४९ को विमान सबै इन्जिन फेल भएपछि जमिनतिर खस्दै थियो। ककपिटमा थिए पाइलट चेस्ली ‘सुली’ सुलेनबर्गर जसले आफैलाई पनि विश्वास नहुने गरी एयरबस ३२०ए विमानलाई मिडटाउन म्यानहटनस्थित हड्सन नदीमा सुरक्षित अवतरण गराए।
नदीमा पौडिरहेका क्यानडा गीज (लामो चुच्चो हुने बकुल्लाजस्तै चरा) सँग ठक्कर खाँदै विमान अवतरण भएको त्यो घटना हड्सनमा भएको चमत्कारका रुपमा विश्व प्रसिद्ध बन्यो।
विमानमा सवार सबै १ सय ५५ यात्रु तथा चालक दलका सदस्य सकुशल रहेको सो घटनालाई सन् २०१६ मा पर्दामा समेत उतारियो। क्लाइन्ट इस्टवुडले बनाएको सो फिल्मलाई
‘सुली : मिराकल अन दि हर्डसन’ नाम दिइएको थियो। फिल्ममा ‘एयरबस ३२०ए’का बहादुर पाइलट सुलीको स्थान लिएका थिए कलाकार टम हंक्सले।
सुलीको बहादुरीपूर्ण कार्यले सबैको तारिफ त पायो तर योसँगसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न भने सबैसामु खडा गरिदियो– के साँच्चै पानीमा विमान अवतरण गर्दा जीवन सुरक्षित हुन्छ?
सुलीले कुराकानीका क्रममा त्यसभन्दा अघि नदी तथा समुद्रमा विमान अवतरण गर्न सकिने बारेमा न्युनतम ज्ञान मात्र लिएको खुलासा गरे। उनले भने, ‘अध्ययनका क्रममा निर्देशन पुस्तिकामा पढेका केही हरफ र कक्षाकोठामा भएको छोटो छलफल नै पानीमा अवतरण गर्न सकिने विषयमा आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको स्रोत थियो।’
उनका अनुसार नेशनल ट्रान्सपोर्टेसन सेफ्टी बोर्ड (एनटीएसबी) ले तोकेको सुरक्षाका ३५ मापदण्डमध्ये फेड्रल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसन (एफएए) ले फ्लाइट १५४९ विमानमा मात्र ६ वटालाई पालना गरिएको पाइयो। आफूलाई सिकाइएको र स्वध्ययनबाट प्राप्त सबै सुरक्षाका उपाय चालकहरुले पूरा गर्ने गरेको भन्दै उनले त्यो समयदेखि आजसम्मको विकासलाई हेर्दा निकै कम मात्र परिवर्तन भएको बताए। विमानमा सवार रहँदा आउने अप्ठेरो स्थितिमा यात्रुहरु सुरक्षित रहन सक्छन्? भन्ने प्रश्न गर्दा ढुक्क भएर जवाफ दिन सकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
‘म यो मानेमा निकै खुसी छु किनकि कुनै विशिष्ट तालिमका बाबजुद खतरा तथा तनावपूर्ण अवस्थामा पनि हामी (पाइलट) हरु कैयौँ यात्रुको जीवन बचाउन सफल भएका छौँ,’ उनले भने।
सिभिल एभिएसन अथोरिटीका अनुसार पानीमा विमान अवतरण गर्दा चालकले निम्न उपायहरु अपनाउन सक्नेछन्–
१) विमानले उडान भर्नुअघि सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न सकिने साधन र त्यसको प्रयोग गर्ने विधिको बारेमा जानकारी दिने।
२) मेडे (आपतकालीन अवस्थाको बारेमा कन्ट्रोल रुममा पठाइने सूचना) तत्कालै पठाउने।
३) यात्रुहरुले सिट बेल्ट बाँधी आफ्नो शिरलाई पेटतिर झुकाएर दुवै हात शिरमाथि कसेर राख्ने।
४) सम्भव भएसम्म निहुरिएर बस्ने तर नसुत्ने।
५) लाइफ ज्याकेटमा हावा भरी विमानको क्याबिनमा राख्ने।
६) जतिसक्दो चाँडो सबै यात्रुलाई लाइफ र्‍याफ्टमा सुरक्षित बेरेर राख्ने।
७) मोबाइल, हाते रेडियो तथा पर्सनल लोकेटर बिकोन जस्ता सामग्री खोल्न लगाउने।
८) पानीमा लाइफ र्‍याफ्टभित्र नरहने अवस्था आएमा शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलित राख्न अर्थात हाइपोथिर्मिया हुनबाट बच्न सबै एक ठाउँमा भेला हुने कोसिस गर्ने।
९) विमानको अवस्थाबारे जानकारी दिने अन्य उपकरणहरु (जस्तैः पाइरोटेक्निक्स हेलिग्राफ) सुचारु गर्ने।
१०) कन्ट्रोल रुममा खतरा र विमान उडिरहेको सम्भावित स्थानको बारेमा समयमै जानकारी दिने तथा उद्धारकर्ताहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन लगाउने।
एनटीएसबीले उक्त आकस्मिक विमान अवतरणको घटनालाई इतिहासकै सफल अवतरणको रुपमा घोषणा गर्यो। यस्ता दुर्लभ घटनाबाहेक अन्य घटनाको अवस्थालाई हेर्दा सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। तर पनि केही व्यावसायिक उडान कम्पनीहरुले भने सम्भव भएसम्म आकस्मिक अवस्थामा पानी मै अवतरण गर्न दबाब दिने गरेको बताइन्छ।
पानीमा भएका अन्य आकस्मिक अवतरण प्रयास
सन् १९७० मा न्युयोर्कबाट आइसल्यान्डको लागि उडेको एएलएम विमानको उडानका क्रममा इन्धन सकिएपछि खराब मौसमका कारण ३ पटकसम्मको अवतरण प्रयास विफल भयो। त्यसपछि कन्ट्रोल रुमबाट क्यारेबियन समुद्रमा अवतरण गर्न निर्देशन जारी भयो। आकस्मिक अवतरणका क्रममा यात्रुहरुलाई आफ्नो सिट बेल्ट बाँध्न जानकारी नदिएकै कारण विमानमा सवार ५७ यात्रुमध्ये २० जनाको मृत्यु भयो।
सन् १९९६ मा अपहरणमा परेको इथियोपियन एयरलाइन्सको विमानलाई पनि इन्धन सकिएको कारण आकस्मिक अवतरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। कोमोरस आइल्यान्ड नजिकै समुद्रमा चालकले अवतरण प्रयास गरे पनि अपहरणकारीसँगको नोकझोकका कारण समुद्रमा नपुग्दै विमान घुमेर किनारमा नै बज्रन पुग्यो। ३ वटा टुक्रामा विभाजित विमानमा सवार १ सय ७५ यात्रुमध्ये १ सय २५ जनाले मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो।
पानीमा अवतरण गर्नका लागि विमान निर्माण कम्पनीले कस्ता योजनाहरु बनाएका छन् त? भन्ने सम्बन्धमा रोयल एरोनोटिकल सोसाइटीका सदस्य अनररी कम्पनी अफ एयर पाइलटका निर्देशक तथा उडानविज्ञ जोन टर्नरसँग गरिएको सवाल-जवाफ :
के पानीमा अवतरण गर्न सकिने विमानहरु निर्माण भएका छन्?
अवश्य पनि छन्। विशेषगरी पानीमा अवतरण गर्न सकिने खालका केही विमान निर्माण भएका छन्। भ्यागुताको जस्तो आकारमा तयार भएका अल्वाट्रस तथा चीनले बनाएको एजी ६०० जिएन्ट एम्फबियनजस्ता विमान यसका उदाहरणहरु हुन्। अग्ला पखेटा हुने यस्ता विमानहरुको इन्जिन पानीमा पनि सहजैसँग चल्न सक्नेगरी निर्माण गरिएको हुन्छ।
अन्य विमान कम्पनीहरुको स्थिति कस्तो छ नि?
पछिल्लो समय बनाइएका आधुनिक विमानहरुलाई पानीमा पनि अवतरण गर्न सकिने तरिकाले निर्माण गरिएको छैन तर आकस्मिक अवतरणलाई सुरक्षित बनाउन अधिकतम उपायहरुलाई भने अवलम्बन गर्न सकिने बनाइएको पाइन्छ। यसले जीवन सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावनालाई धेरै हदसम्म बढाइदिएको छ।
के एयरलाइन्सहरुले पानीमा विमानको अवतरणका लागि परीक्षण गर्नुपर्छ?
कम्पनीहरुले विमानको प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र दिँदा यो पनि परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर आवश्यक ठान्दैनन् तर पनि उनीहरुले सैद्धान्तिक मूल्यांकन भने गरेका हुन्छन्। यस्तो अवस्था अपवादका रुपमा मात्रै आउने भएकाले पनि कम्पनीहरुले त्यो नचाहेका हुन सक्छन्। त्यसको सट्टामा चालकका लागि उपलब्ध गराइने निर्देशिका पुस्तिकामा आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया तथा सामग्रीको राम्रोसँग उल्लेख गरिएको हुन्छ। जसले गर्दा अवतरण सुरक्षित गराउन सहयोग मिल्छ।
पानीमा अवतरण गर्दा विमान चालकका लागि सुरक्षित बाटो के हुन सक्छ?
धेरै उपायहरुमध्ये विमानलाई समुद्री छाल तथा तरंगहरुसँग वारपार हुनेगरी भन्दा समानन्तर तरिकाबाट अवतरण गर्दा बढी सुरक्षित हुने मानिएको छ। पानीको बहाव शान्त रहेको अवस्थामा अवतरण गर्दा बढी सुरक्षित तथा चालकका लागि पनि सहज हुने गर्दछ। साथै रातको समयमा भन्दा दिनको उज्यालोमा गरिने अवतरण हितकर मानिन्छ।
पानीमा अकस्मात् अवतरण गर्नुपर्ने स्थिति आएमा यात्रुहरुले केके कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
विमानको निर्माण पानीमा तैरन सक्ने आकारमा तयार गरिएको हुन्छ। यदि विमान पानीमा अवतरण भयो भने पनि यात्रुका लागि विमानबाट निस्कन अधिकतम समय रहने गर्दछ। त्यसकारण हतार नगर्नु नै बेस हुन्छ। यदि हरेक यात्रुलाई लाइफ ज्याकेट उपलब्ध गराइएको छ भने अवतरणका क्रममा यात्रु बेहोस भए पनि सजिलै ऊ पानीमा तैरन सक्छ र जीवन सुरक्षित हुन्छ।
व्यक्तिगत रुपमा कुनै पनि यात्रु जीवीत रहने सम्भावना अवतरणका क्रममा उसले अपनाएको आसनमा भर पर्छ। यात्रुहरुले सिट बेल्ट बाँधी आफ्नो शिरलाई पेटतिर झुकाएर दुवै हात शिरमाथि कसेर राख्ने आसन नै सो समयका लागि अति श्रेयस्कर मानिन्छ। यस्तो आसन गर्न अभ्यस्त हुने यात्रुले सही समयमा सिट बेल्ट खोलेर विमानबाहिर निस्कन सके जोखिम कम हुने गर्छ।
पछिल्लो वर्षलाई हेर्दा हवाई सेवा धेरै सुरक्षित बन्दै गएको भान हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि विमानमा सवार गर्ने यात्रुहरुले केही समय लिएर आकस्मिक रुपमा निम्तिन सक्ने खतरा तथा बच्ने उपायहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने गरेमा समयको सही सदुपयोग तथा खतराको समयबाट पार पाउन सहज हुने देखिन्छ। अर्को कुरा पानीमा विमान अवतरण गर्दा सुरक्षित रहन सकिन्छ तर तपाईंको सुरक्षामा आफूले आफूलाई कतिको सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ।
(दि टेलिग्राफका लागि सोसल मिडिया कन्टेन्ट इडिटर ग्रेग डिकिन्सनले तयार पारेको आलेख। अनुवाद : विमर्श कँडेल)
विमान दुर्घटनामा बाँच्न सफल पाण्डे भन्छन्– 'दुर्घटनाकै कुरा गरिरहँदा प्लेन खस्यो'
बर्माको सडकमा नेपाली 'राजा-रानी' (फोटो फिचर)
बच्चालाई हुर्काउने र पढाउनेबारे शिक्षाविद् गिजुभाईका टिप्स
'कर्णाली टपर'को सिंहदरबार प्रवेश
डा केसीकी आमाको पिरलो– कति तिर्खा लाग्छ होला उसलाई? [भिडियो सहित]
रात्रिकालीन मनोरन्जन व्यवसायका दु:ख : युवती भन्छन्– श्रमसँगै हुन्छ शारीरिक शोषण
घुम्न जाऔं भन्दै घरमा लगेर बालिका बलात्कार गर्ने पक्राउ
बिचौलियाको बिगबिगी : कामदारजस्तै ठगिन्छन् म्यानपावर व्यवसायी पनि
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको श्रीखण्ड चन्दन पशुपतिमा आजदेखि चढाइने
आज तुलसी विवाह गरी हरिबोधिनी एकादशी मनाइँदै
तीन महिनाभित्र तल्लो कमिटीसम्म एकता भइसक्छ : प्रचण्ड
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशकका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस
जेलभित्रै जुवातास अखडा : चौकीदारको आम्दानी मासिक ४ लाख
हत्याका बेला खसोग्गीलाई दिइएको चरम यातनाको श्रव्य सामग्री सुन्न सकिन : ट्रम्प
के गर्छन् कांग्रेस नेताका सन्तान?
भरतपुर विमानस्थल यसकारण 'उच्च जोखिममा'
EXCLUSIVE : जेलभित्रै जुवाखाल, नाइकेले उठाउँछन् लाखौं (भिडियोसहित)
सन्दीपको व्यस्तता : ५ महिना, ५ देश, ५ लिग र २ करोड आम्दानी
कम्युनिस्ट बिपी किन बदलिए?
ट्याक्सी दर्तामा नयाँ मापदण्ड, मन्त्री महासेठलाई रिझाउन व्यापारीहरुको तँछाडमछाड
बेलुनमा उडे मुख्यमन्त्री गुरुङ [फोटो फिचर]